Waa maxay Maalinta Jacaylka “VALENTINE DAY” & Sababaha Diinta Islaamku ku diiday? | Maalmahanews
Sheekda maalinta loo bixiyey Jacaylka Aduunka “Valentine Day) ayaa ka dhalatay iska horimaad dhexmaray boqor Roomaan ah iyo nin diinta Kiristaanka haystay oo Valentine la odhan jiray, soo bilaabmatay qarnigii saddexaad, xilli boqortooyadii Roomaanku cadaadis saareen dadkii haystay diinta Kiristaanka. Boqor Roomaanku lahaa oo la odhan jiray Claudius II aya amray in dhamaan dadku caabudaan 12 Ilaah, isla markaana sheegay in la dili doono qofkii ku dhaqma diinta Kiristaanka.
U dabaaldega maalinta jacaylka aduunka Valentine Day, ma banana in laga qeybgalo xuskeeda, sababaha soo socda awgood:
Waa maalin la sameeyey, oo aan wax daliil ah ku lahayn diinta islaamka.
Waxay dhiirigelinaysaa jacayl iyo ficilo waali la sameeyo.
Waxay ugu yeedhaysaa qalbiyada dadka in laga buuxiyo arrimo aan micno lahayn, taasoo ka horimanaysa dariiqa saxa ee Ilaahay inna amray inaan raacno.
Ma banaan maalintan qaab kastoo loo weyneeyo, hadday tahay cuntooyin, cabitaano, dhar, hadyado isweydaarsasho ama wax kale. Dadka muslimiintu waa inay ku faanaan diintooda islaamka, qofka islaamka ahna isagaa dariiqa xaq dadka ugu baaqa, maaha in dariiq khaldan loogu baaqo, isla markaana aanay isu dhigin dad liita oo ku deyda fikradaha gaalada.